Shina CPLA Shina vita amin'ny Plastika tsy misy rano vita amin'ny plastika azo averina 6 santimetatra Gianty
CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina 6 santimetatra
Ny asidra poly-lactic crystallized, na CPLA, dia polymer miorina amin'ny zavamaniry ampiasaina amin'ny hoso-doko. Ny koba CPLA compostable dia matanjaka ary mafy orina amin'ny fandefasana hafanana amin'ny hafanana. Ny koba vita amin'ny plastika dia azo ampiasaina amin'ny lasopy mpizara, lovia vary, na sakafo hafa ho an'ny sakafo ivelany na anatiny.
PLA dia mijoro amin'ny Polylactic Acid. Plastika azo vokarina azo avy amin'ny loharanom-paosy azo havaozina toy ny katsaka na siramamy. CPLA dia PLA kristaly izay matanjaka ary tsy mahatohitra hafanana avo kokoa. Samy PLA sy CPLA no vita vokarina ary vita 100% biodegradable sy azo averina.
Ny vokatra azo avy amin'ny solosaina dia miovaova biodegrade ao anatin'ny tsingerin'ny fizotran'ny compost. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny biodegradable sy compostable dia ny fotoana. Tsy ny vokatra biodegradable rehetra dia raisina ho compostable satria mety handany fotoana bebe kokoa handrava. Ny vokatra azo hovonoina dia hirodana eo anatrehan'ny hafanana, ny hamandoana ary ny zavamananaina mba hamorona compost.
Ny sombin-tariby CPLA eto amintsika dia manana BPI, OK Compost, FDA, SGS fanamarinana, sns. Ireo fanamarinana ireo dia maneho ny fahaiza-manao azo trosaina sy ny fiarovana ny fifandraisan-tsakafo.
Ny FDA dia mijoro ho an'ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina, masoivohon'ny governemanta tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny sakafo, ny sakafo famatsiana ara-tsakafo, ny zava-mahadomelina olombelona, ​​ny vaksiny, ny ra ary ny vokatra biolojika, fitaovana ara-pitsaboana, elektronika famoahana taratra, kosmetika, vokatra vazaha ary vokatra vita amin'ny sigara amidy. na amboarina any Etazonia. Ny FDA dia manara-maso sy mampihatra ny fitsipika mifandraika amin'ireo indostria ireo.
• Namboarina avy amin'ny zavamaniry vita amin'ny zavamaniry vita amin'ny zavamaniry, novokarina avy amin'ny tsanganana havaozina haingana
• Ny haingon-tany misy haingony hatrany amin'ny 85 ℃
• Rano sy rano-porofo amin'ny fahamaotinana
• Ny akora CPLA dia azo hatsangana tanteraka ao anaty trano fivarotana varotra varotra mandritry ny 180 andro
• Azo alaina fotsy, mainty na miloko, nofonosina tsirairay na niforona
• Nekena ny FDA ho an'ny fifandraisana mivantana
Item CPLA 6 santimetatra Knife
Color White, Black, miloko
Ny entana isaky ny fonosana 50 pcs
Fonosana isaky ny baoritra 20 fonosana
Haben'ny baoritra 30 * 17 * 17cm
Item Fantsom-bidy 6 inci
Color Fotsy. Black. midorehitra
Haben'ny baoritra 34 * 16 * 20cm
Item CPLA 6 santimetatra sipa
Haben'ny baoritra 32.5 * 15 * 23cm
Previous: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina 6,5 ​​santimetatra
Manaraka: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy alikaola azo averina